Izinqolobane Zemicimbi Yomphakathi »IHodges University
Isigaba: Imicimbi Yomphakathi
Impilo Yekampasi, Imicimbi Yomphakathi
Joyina Idrayivu Yethu Yokunikela Ngezilwane Nezilwane Masisekele umphakathi wethu futhi sisize abanye! IHodges University ibambisene neHarry Chapin Food Bank neBrooke's Legacy Animal Rescue, ukuqoqa izinto zemindeni eswele kanye nabangane bethu abanoboya. Sijoyine ngokunikela kusuka ngoJuni 1 - Juni 15, 2020. Ungayenza [...]	Funda kabanzi
Ungasiza! Iqoqo Lesiphepho Lesiphepho SaseDorian eBahamas
IStilwell Enterprises neHodges University Joyina Imizamo Yokusiza EBahamas ISiphepho uDorian sabhubhisa iBahamas, futhi izakhamizi lapho ziludinga kakhulu usizo. Amakhampasi aseHodges University aseFort Myers naseNaples ayizindawo zokwehlisela imizamo yokusiza eBahamas. Izinto esiziqoqayo zizoyiswa ngqo eBahamas, ngezilokotho zeStilwell Enterprises. IHodges [...]	Funda kabanzi
IZonta Honor And Empowerment Umcimbi Impumelelo
Umcimbi weZonta Club of Naples 'Honor and Empowerment obubanjelwe eHodges University ube yimpumelelo enkulu! Abaholi bomphakathi nabahlanganyeli babuthana eKampasi yethu yaseNaples ngo-Ephreli 18, 2018, ukuze bafunde kabanzi ngokuzinikeza amandla kanye nomphakathi wabo emcimbini weZonta's Honor and Empowerment. UHodges 'uyajabula ukuthi ubambe lo mcimbi ngokubambisana ne- [...]	Funda kabanzi
Abasebenzi baseHodges University banikela ngamathoyizi angaphezu kwama-500 kumathoyizi amaTots
Abasebenzi baseHodges University Banikela Ngaphezulu Kwamathoyizi Angu-500 Kumathoyizi Amachashazi Unyaka nonyaka, abasebenzi baseHodges University bagubha amaholidi ngokunikeza izingane. Kulo nyaka, bavule izinhliziyo zabo futhi banikela ngamathoyizi angaphezu kwama-500 wamathoyizi amaTots. "Ukupha kwabo bonke ubuhlakani bethu nabasebenzi kuthinta inhliziyo," kusho uDkt John Meyer, umongameli, [...]	Funda kabanzi